सन्दर्भ असुरक्षित कर्मचारी सङ्गठन: बदलाको राजनीति गरेर बिनय तामाङले गरीबको भाग काट्दैछन्- विमल गुरुङ - खबरम्यागजिन
Homeखबरसन्दर्भ असुरक्षित कर्मचारी सङ्गठन: बदलाको राजनीति गरेर बिनय तामाङले गरीबको भाग काट्दैछन्- विमल गुरुङ
सन्दर्भ असुरक्षित कर्मचारी सङ्गठन: बदलाको राजनीति गरेर बिनय तामाङले गरीबको भाग काट्दैछन्- विमल गुरुङ
‘भिडियो हेर्दा ती अस्थायी कर्मचारीहरूको अनुहारमा मैले एकप्रकारको त्रास, आतङ्क देखें। सायद उनीहरूलाई बिनय तामाङले अकारण पुलिस लगाउने, केश हालिदिने आशङ्का होला अथवा कसैले त्यसरी डर देखाएको होला। तर उनीहरूलाई हामी न्याय दिलाउने छौं। बिमल गुरुङ अब धेरै यसरी जनताबाट टाडा बस्दैन। म आउँछु अनि बोर्ड मिटिङको सिफारिसमा उनीहरूलाई नोकरी दिएको प्रमाण बोकेर ती सबै भाई बहिनीलाई न्याय दिलाउने छु। केही छोटो समय पर्खिनु मात्रै पर्नेछ।
सिलगढी,5दिसम्बर
हिमाली च्यानल दार्जीलिङले गत ४ दिसम्बर २०१८ मा अपलोड गरेको बिनय तामाङको वार्ताको भिडियो हेरेपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले जिटीए बीओए केयर टेकर विनय तामाङको अमानवीय, बदलाको भावनाले ओतप्रोट विचार अनि जनमतलाई जबरजस्ती प्रभावित पार्ने राजनीति देखेर आफूलाई दुःख लागेको बताएका छन्।
हिमाली च्यानलको उक्त भिडियोमा बिनय तामाङले भनेका छन्, “असुरक्षित कर्मचारी सङ्गठन पहिलाको जीटीएमा २०१३ को अन्तदेखि विभिन्न विभागमा काम गर्नु भनेर बिमल गुरुङले अह्राएको हो अनि उनीहरूलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारबाट तनखा छुट्याइएको थिएन, यी कर्मचारीहरू कन्ट्राकच्युअल वर्कर पनि होइनन्, जीटीएबाट आधिकारिक अपोइन्टमेन्ट लेटर पनि छैन, उनीहरूको हातमा केही छैन, विमल गुरुङ भइन्जेल फाइनान्सबाट पैसा निकालेर दियो, पछि अडिट गर्दा उनीहरूको प्रत्येकको नौ हजार गरेर निकालेकोले अडिट मिलेको छैन।’
त्यसको जवाबमा विमल गुरुङले भनेका छन्, ‘म बताउन चाहन्छु कि मेरो पालीमा जीटीएमा ८२५ मेनपावर सिर्जना भएको थियो। जबकी नोकरी दिनैपर्ने आर्थिक रूपले विपन्नहरूको संख्या अधिक थियो। यसैले मानवीयताको नातामा तत्कालिन जीटीएले २५०० जनालाई अस्थायी नोकरी दिएको हो। मैले आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर क्षेत्रीय सरकार चलाएको यो प्रत्यक्ष उदाहरण हो। तर ती जरूरतमन्द विपन्न परिवारहरूको नोकरी खोसेर बिनय तामाङले गरिबीको उपहास गरेको छर्लङ्ग देखिएको छ। विनय तामाङले गरिबीको उपहास उडाउँदै भनेका छन्, ‘उहाँहरू कोर्टमा गए पनि जित्दैनन्, किनभने उहाँहरूसँग इन्गेजमेन्ट पनि छैन अपोइन्टमेन्ट पनि छैन। विभागले खोजेकोमा १२५७ जनाको लिस्टमात्रै हामीसँग छ अनि त्यै १२५७ जनालाई हामीले कन्टिनजेन्ट कै हिसाबले राख्दा पनि त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने?’ मेरो विचारमा यो त सरासर धम्की हो। गरीबलाई हात मुख जुटाउन साह्रो पर्छ भने अदालत कुन पैसाले धाउन सक्छन्?
के नेता हुँ भन्दैमा गरीबलाई यसरी हेप्नु अमानवीयता होइन? मेरो कार्यकालमा उनीहरूलाई राखेको हो। अनि उनीहरूलाई गलत तरिकाले राखेको होइन। हामीले बकाईदा जीटीए बोर्डको मिटिङ गरेर सबै सभासद्को सहमतिमा बोर्ड मिटिङमा प्रस्ताव पारित गरेर उनीहरूलाई नोकरीमा राखेको हो।
यसमा जीटीए सचिव समेत सामेल छन् अनि फाइनेन्सले पैसा उपलब्ध गराएको छ। त्यस बोर्ड मिटिङमा बस्ने बिनय तामाङले आज कसरी उसलाई केही थाहा नभएको जस्तो नाटक गर्दैछन्? अनि कसको ईशारामा गर्दैछन्? हामीले दार्जीलिङमा भएको बेकारी समस्यामा न्यूनता ल्याउने उद्देश्यले निर्धारित मेनपावर भन्दा अधिक संख्यामा हाम्रा भाई-बहिनीहरूलाई नोकरीमा लगाएको हुनाले यता-उता खोजमेल, हारगुहार गरेर पनि हामीले उनीहरूलाई तलब दिँदै नै आएका थियौं।
किनभने हाम्रो उद्देश्य दार्जीलिङमा भएको बेकारी समस्यामा न्यूनता ल्याउनु थियो। तर आज बिनय तामाङ बेकारी संख्यामा बढोत्तरी गर्न चाहन्छ।
उनीहरूकोमा सेलेरी इन्फोरमेसन एण्ड कल्चर विभागबाट मेनपावर मार्फत जान्थ्यो। त्यति बेला इन्फोरमेसन एण्ड कल्चर विभाग बिनय तामाङ कै जिम्मामा थियो। त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने, कसरी दिने भन्ने कुराको सबै जानकार बिनय तामाङ पनि हो। अहिले उनले कसरी केही थाहा नभएको जस्तो गर्दैछन्? ती गरीबको घरमा पनि बिहान बेलुकी सादा नै भएपनि खाना पाक्नुपर्छ भन्ने कुरा बिनय तामाङले किन देख्दैनन्? हामीले दिनसकेको तनखा उनले दिन सक्दैनन् भने उनी कुन अधिकारले कुर्सीमा बस्छन् त? उनले मेरो मान्छे र उसको मान्छे भन्ने छुट्याएर राजनीति गर्नु निम्न स्तरको राजनीतिको परिचय हो।’
विमल गुरुङले अझ भनेका छन्, ‘भिडियो हेर्दा ती अस्थायी कर्मचारीहरूको अनुहारमा मैले एकप्रकारको त्रास, आतङ्क देखें। सायद उनीहरूलाई बिनय तामाङले अकारण पुलिस लगाउने, केश हालिदिने आशङ्का होला अथवा कसैले त्यसरी डर देखाएको होला। तर उनीहरूलाई हामी न्याय दिलाउने छौं। बिमल गुरुङ अब धेरै यसरी जनताबाट टाडा बस्दैन। म आउँछु अनि बोर्ड मिटिङको सिफारिसमा उनीहरूलाई नोकरी दिएको प्रमाण बोकेर ती सबै भाई बहिनीलाई न्याय दिलाउने छु। केही छोटो समय पर्खिनु मात्रै पर्नेछ।
बिनय तामाङले प्रत्येक मिटिङमा यी नै अस्थायी कर्मचारी भाई-बहिनीलाई प्रयोग गर्छन्, मुख्यमन्त्री आउँदा बाटोमा लाम लाग्नुदेखि ठाउँ ठाउँको मिटिङमा यिनीहरू नै पुगेको हुनुपर्छ। उनीहरूले पनि आफ्नो रोजी रोटीको कारणले जे भन्यो, जसो भन्यो सबै मान्दै नै आएका हुन्। तर आज आएर अचानक यसरी उनीहरूको पेटमा लात हिर्काउने काम गर्नु शत्रुलाई पनि शोभा नदिने काम हो। विनयले भाग खोसेको गरीबहरूको आँसुले उनको अस्थायी वर्चस्व पनि यसरी नै विघटन हुने दिन धेरै पर्खिनु पर्दैन।’
विनय तामाङको द्वेषपूर्ण राजनीतिले त्यतिबेला आकाश छोएको भन्दै गुरुङले भनेका छन्, ‘जतिबेला उनले १२५७ जनाको कामको प्रोसेस गर्दैछौं, तर हामी प्रोपर भेरिफिकेसन गर्छौं…, त्यहाँ अहिले पनि बिमल गुरुङलाई सघाउनेहरू छन् भन्दैछन्। उनले यो के भनेको? प्रजातन्त्रमा कसैले पनि कसैलाई पनि सघाउनु पाउँछ। विनय तामाङले जनताको मन जित्नु सकेको छैन भने त्यसको दोष जनताको होइन, बिनय तामाङको हो। अनि आफ्नै दोषको कारणले राजनैतिक द्वेष बोकेर गरीब अस्थायी कर्मचारीको काम खानु अनैतिकताको पराकाष्ठा हो। जनताले ठीक समयमा यसको जवाब दिनेछन्।’